Jose Mourinho Oo Meel Iska Dhigay Cristiano Ronaldo Iyo
Jose Mourinho ayaa u magacaabay halyeeyga Brazil Ronaldo Nazario xiddigii abid ugu fiicnaa kubada cagta isagoo sheegay in Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi inay ku xigeen kaliya u yihiin halyeeygaan.
Tababaraha Tottenham ayaa la shaqeeyay Ronaldo Nazario halkii xilli ciyaareed ee uu joogay Barcelona isagoo ka caawiyay kooxdii tababare Sir Bobby Robson ku guuleysiga Coppa del Rey, Cup Winners Cup iyo Supercopa de Espana.
Kaliya 19 sanno jir ayuu ahaa markii uu ka soo wareegayay PSV Eindhoven, weeraryahanka reer Brazil ayaa ka yaabsaday Mourinho isagoo dhaliyay 47 gool 49 kulan uu u saftay Barcelona, wuxuu xilli ciyaareedkaas ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or.
Mourinho ayaa yiri sida ay qortay Corriere dello Sport: “Ronaldo Nazario ayaa ah xiddigii abid ugu fiicnaa ee aan garoon ku dhex arko.
“Waxaan qabaa in dhaawacyo uu dilay waayihiisa ciyaareed oo noqon lahaa mid ka sii cajiibsan.
“Laakiin tayada uu ninkaas lahaa markii uu 19 sanno jir ahaa waxay aheyd wax cajiib ah.”
Dhaawacyo ayaa dilay waayaha ciyaareed ee Ronaldo kaasoo sidoo kale lagu yaqaanay xafladeynta habeen walba.
Dhaawac jilibka ah oo ku soo bilowday waqtigiisii Netherlands ayuu la yimid Inter Milan isagoo labo jeer jabiyay rikoodhkii suuqa kala iibsiga.
Xilli ciyaareedkiisii seddexaad ee kooxda Talyaaniga waxaa dhaawac xun uu ka soo gaaray Jilibka taasoo keentay inuu seddex sannadood garoomada ka maqnaado.
Wuu soo kabsaday isagoo Brazil ku hogaamiyay Koobka Adduunka sannadkii 2002, Ronaldo ayaa noqday gooldhaliye cajiib ah isagoo u saxiixay Real Madrid halkaasoo uu ku qaaday abaalmarintiisii labaad ee Ballon d’Or.
Mourinho ayaa garwaaqsaday in weeraryahanka uusan muddo dheer garoomada ku jriin sida Ronaldo iyo Messi laakiin waxa uu aaminsan yahay in tayadiisa dabiiciga ah inay ka fiican tahay labada xiddig.
57 jirkaan ayaa hadalkiisa raaciyay: “Ma uusan soo marin waayo ciyaareed oo la mid ah Cristiano ama Messi, 15 sannadood oo ay halka ugu sareysa ka ciyaarayaan maalin walba.
“Laakiin tayo dabiici ah, cajiib ayuu ahaa”